Забур 143 CARS - Nnwom 143 AKCB
1Awurade, tie me mpaebɔ,
tie me mmɔborɔsu;
fi wo nokwaredi ne trenee mu
bra bɛboa me.
2Mfa wʼakoa nkɔ atemmu mu,
na ɔteasefo biara nteɛ wɔ wʼanim.
3Ɔtamfo no taa me,
ɔbɔ me hwe fam;
ɔma me tena sum mu
te sɛ wɔn a wowuwuu dedaada.
4Ɛno nti me honhom atɔ beraw wɔ me mu;
na me koma di yaw wɔ me mu.
5Mekae tete nna no;
midwinnwen wo nnwuma
ne nea wo nsa ayɛ nyinaa ho.
6Mema me nsa so kyerɛ wo;
wo ho sukɔm de me kra sɛ asase kesee.
7Awurade, gye me so ntɛm;
me honhom tɔ piti.
Mfa wʼanim nhintaw me
anyɛ saa a mɛyɛ sɛ wɔn a wɔkɔ amoa mu no.
8Ma mente wʼadɔe a ɛnsa da no ho asɛm daa anɔpa,
na mede me ho ato wo so.
Kyerɛ me ɔkwan a memfa so,
na wo na mema me kra so kyerɛ.
9Awurade gye me fi mʼatamfo nsam,
na wo mu na mede me ho hintaw.
10Kyerɛ me na menyɛ wʼapɛde,
na wo ne me Nyankopɔn;
ma wo honhom pa no
nkogya me asasetaw so.
11Awurade, wo din nti, kyɛe me nkwa so;
wo trenee mu, yi me fi ɔhaw mu.
12Fi wʼadɔe a ɛnsa da no mu mua mʼatamfo ano;
na sɛe wɔn a wokyi me no nyinaa,
na meyɛ wo somfo.
AKCB : Nnwom 143